Rayson eRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko HighQuality Latex memory foam pillow Wholesale-Rayson Spring Mattress Manufacturer
isinki yokushisa yomkhiqizo yakhelwe ukudonsa ngempumelelo ukushisa ekukhanyeni bese ikudlulisela emoyeni.
I-facto Siyathembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende aphephile futhi azwakala kahle. Uma unanoma yimiphi imibuzo noma ufuna ukwazi kabanzi nge yethu, sishayele ngqo. Ngaphezu kwalokho, ukulethwa kwethu kufika ngesikhathi futhi kungahlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende. Kuze kube manje, uRayson udlulise isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba jikelele. Yonke imikhiqizo kubandakanya umkhiqizo wethu omusha inikezwa nge-design entsha, ikhwalithi eqinisekisiwe, namanani entengo wokuncintisana.
Yiziphi izindlela zokukhokha ozamukelayo? I-LC lapho ubona / nge-TT, i-30% yeDeposi ne-70% esele iphikisana namakhophi wemibhalo yokuthumela i-witinin izinsuku zokusebenza eziyi-7 Ungangisiza yini ukuthi ngizenzele noma ngisebenzise i-logo yami kumkhiqizo? Singenza umatilasi ngokwedizayini yakho noma sinikeze insizakalo ye-OEM ukuthi udinga nje ukuthi usinikeze umkhiqizo wakho wobuciko noma izithombe zelogo.Ungakhipha kanjani umatilasi ogoqiwe? 1.Beka ibhokisi phezulu endaweni eyisicaba egumbini lakho lokulala, donsela umatilasi ngokucophelela bese ubeka embhedeni wakho. 2. Sika ngokucophelela isikhwama sangaphandle ngesikele uqiniseke ukuthi awusiki ipulasitiki embi ngaphakathi noma kumatilasi, ungammangaleli ummese. 3. Khipha umatilasi ovaliwe ongenalutho ungene embhedeni wakho 4. Sika ngokucophelela isikhwama sepulasitiki eceleni kwewashi njengoba umatilasi eqala ukuwohloka ngokushesha, Susa isikhwama sepulasitiki. 5.Vumela amahora angama-24 ukuthi omatilasi bakho abasha banwebe ngokugcwele.